Friday April 05, 2019 - 17:24:58 in Xiriirka Ciyaaraha Fudud by Nocsom Editor
Cabdullahi Jaamac oo kamid ahaa cayaaryahanada Guddiga Olombikada qaranka Soomaaliyeed ku matalay cayaaraha Olombikada wadamada Soonka shanaad 2019 ayaabiladda maarta ku guulaystay kadib markii uu ku orday 3’58’13.
Tartanka waxaa kaalinta koowaad ka galay Melkem Zegeye Wube oo dalka Ehtiopia u dhashay ayaa kalinta Koowaad galay kaasoo ku orday 3’57’09. Halka uu kaalinta labaad u galay cayaaryahan Bitoyi Jean de Deui oo dalka Burundi u dhashay.
Cayaaryahanka Xulka qaranka dalkeena Soomaaliya ayaa ka hormaray cayaaryahanada, Meron Goitom Yemawi oo dalka Ereterea u dhashay. Kiplangat Joel oo dalka Uganda ka socday iyo Otimar Kesurapeter oo South SudanMatalayay.
" Aad ayuu ugu dhawaaday inuu Biladda dahabka ama biladda Qalinka kuguulaysto sidaasi waxaa yiri Guddoomiyaha Ku xigeenka xiriirka cayaaraha Fudud oo faarax Cali Macalin oo ka mid ah wafdiga Soomaaliya ee tartanka ka qayb galaya”.
Waa natiijo kale oo wanaagsan oo usoo hoyatay Soomaaliyakadib markii tartankii labaad oo xiriir ah ay bilado kasoo hoyeen, waana dadaalkii iyo juhdiga ay Guddiga Olombikada Soomaaliyeed ku bixiyeen cayaartoyda heer qaran ee cayaarahafudud o o kuwaa oo labadii sano ee lasoo dhaafay xero dhamaystiran ku qaadanayay gudaha dalka iyo dibadiisa.
15 Maarso 2019 ayay Dalka Jabuuti Soomaaliya ka heshay laba billad oo dahab ah kadib markii ay kaalinta koowadka galeen tartanka oroka800 iyo 1500 mitir.